PRINCE2 Foundation sy Fampiofanana momba ny fampiofanana momba ny fampianarana sy fampiharana
PRINCE2 Foundation sy mpandalina
PRINCE2 Fanofanana momba ny Fanofanana sy ny Fanofanana momba ny fampiharana
Prince2 Foundation & Fianarana Fanofanana
PRINCE2® (Tetik'asa IN Controlled Environments), dia fomba fitiliana manerantany ampiasain'ny tetikasa izay mamakivaky anao amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny tetikasa mahomby. PRINCE2® dia fomba goavana ary mikendry ny karazana tetikasa rehetra. PRINCE2® Foundation sy ny fampiharana ara-pitsarana dia hahafantatra ireo manam-pahaizana manokana momba ny fampiasana io tetikasa io izay novolavolaina sy nampiasaina tamin'ny fitondrana Angletera ary nampiasaina tany amin'ny sehatra tsy miankina iraisam-pirenena. Izy io dia mampiseho ny fomba amam-panao sy ny fikarohana tsara indrindra amin'ny fitantanana ny tetikasa. Ity fampianarana ity dia hanomana anao amin'ny PRINCE2® Foundation sy ny PRINCE2® Practitioner ary ny tombontsoa amin'ny fahazoana io fanamarinana io dia mbola mavesatra loatra ny vidin'ny certification prince2.
Ny tanjon'ny fampiofanana fototra PRINCE2 sy ny fampiharana
Mpihaino ho an'nyPRINCE2 momba ny fianarana sy ny mpitsabo
fepetra takiana mialohan'ny ahafahanaho an'ny mari-pankasitrahana fototra PRINCE2